E nwere ọtụtụ ụzọ na-eme ka n'aka na flash ma ọ bụ mkpịsị aka mbanye na-abụghị nanị partitioned ma ọ ekewaa dị ka kwa mkpa na ọchịchọ nke onye ọrụ iji jide n'aka na faịlụ nakwa dị ka nchekwa na-haziri na nke kacha mma o kwere omume n'ụzọ . Ọ bụ-ahụ kwuru na e nwere ọtụtụ uru na-metụtara nkebi nke mkpịsị aka mbanye ihe atụ ụfọdụ tupu ngwa na chọrọ USB buut nwere ike arụnyere iche iche na ngalaba nke USB iji jide n'aka na onye ọrụ na-akawanye multiple uru na nke a banyere. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na mgbe a flash mbanye bụ partitioned mgbe ahụ ndị ọkachamara na-eji ngwaọrụ a iji wụnye windows na-eme ka n'aka na USB usoro buut họrọ nwere ike iwunye abụọ dị iche iche abịakọrọ nsụgharị nke OS iji jide n'aka na onye na-dị ka kwa oke nke ha ahịa arụnyere na jide n'aka na needful a mere nke bụ na uzọ ọzọ agaghị ekwe omume ma ọ bụrụ na USB na-adịghị partitioned. Ọ bụkwa otu nke kasị mma omume na-eme ka n'aka na USB partitions na-aha ya dị ka kwa ọchịchọ ma nchekwa na na-metụtara a akpan akpan aha na-abụghị nanị echekwara ma ha na-enweta na ala na afọ ojuju. Ọ bụ ya mere ihe biakwa obibia eziokwu na partitioning a flash mbanye bụ mkpa nke hour maka ndị na-achọ a tech mpempe na-arụ ọrụ ha na otutu ụzọ.
Ihe dị mkpa ka e mere n'ihu partitioning
A onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na di na nwunye nke ihe na-abụghị nanị mere n'ihu USB na-partitioned ma ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma omume na-sokwaara mere na bụrụ na nke ọ bụla misadventure aga na version na-nyeghachiri ke kasị mma n'ụzọ. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ tupu partitioning na flash mbanye kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma na ala nke nkà usoro na-etinyere na-arụ ọrụ mere na ụfọdụ n'ime ha na e kọwara dị ka n'okpuru:
1. Data ndabere
Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma na ọkaibe nzọụkwụ na kwesịrị iwere iji jide n'aka na needful a mere enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. The data ugbu na USB mbanye kwesịrị ndabere iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na ikpe nkebi ada ada. Ọ na-na-kwuru na-eme nke a ga-ekwe ka onye ọrụ na-aghọ ndị gara aga version soonest kwere omume.
2. nkebi software
Ezi nkebi software ga-eji jide n'aka na needful na-eme na ihe kasị mma n'ụzọ. Onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na nkwado nke usoro ihe omume nakwa dị ka atụmatụ na e agbakwunyere ndị kasị mma ma ọ bụrụ na atụmatụ ndị na akara na ihe ndị a chọrọ mgbe ahụ software ga-arụ ọrụ na ndị kasị mma na-eme ọrụ n'ihi na onye ọrụ mfe.
Nzọụkwụ site nzọụkwụ nkuzi nkebi a USB mbanye
The nkuzi na ga-ọkọnọ na nkebi nke a bụ ọkaibe dị ka ọ na atụmatụ ndị ahụ ngwaọrụ na-mara na-arụ ọrụ na-enweghị ihe ọ bụla nke na hassle. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na nzọụkwụ na-kwuru ebe a na-soro dị ka kwa chọrọ na otu ka nke ha na-egosi ebe a iji hụ na ndị kasị mma e mere. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị hụ na ngwaọrụ na-achọrọ na-arụnyere ji anya iji jide n'aka na ihe ga-esi dị na akara na chọrọ nke onye ọrụ na onye ha na-inweta ihe kasị mma nkebi na oge na-enweghị adịkwa ọ bụla data na mgbalị . The usoro adịghị ewe oge na niile na onye ọrụ kwesịrị nnọọ na-eso nzọụkwụ na-kwuru hereunder:
1. The data bụ na-ndabere na USB mbanye shouldbe etinyere n'ime ọdụ ụgbọ mmiri nke na-eji maka otu:
2. The Lexar bootit omume bụ na-arụnyere n'ihu:
3. The USB kwesịrị aha ya bụ ma ọ bụ ticked dị ka mbughari:
4. The onye ọrụ kwesịrị eme ka ahụ n'aka na disk management na meghere n'ime windows na ọ pụrụ-mere site na nri na ịpị My Computer na akara ngosi na mgbe ahụ na-ahọpụta Jikwaa:
5. The ugbu a nkebi bụ ga-ehichapụ na zuru:
6. The onye ọrụ kwesịrị eme ka ahụ n'aka na ndị ọhụrụ nkebi na-kere dị ka kwa ọchịchọ na mkpa na iot nwekwara okokụre usoro:
Olee otú ego ma ọ bụrụ na nkebi bụ ịga nke ọma, ihe na-eme mgbe it`s okpu
Ịga nke ọma nkebi
1. Onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma usoro a rụrụ na nke a na ọ ga-mere site na-eme n'aka na USB mbanye ịtinye ọzọ mgbe usoro nke nkebi e okokụre. Ọ ga-egosi ugbu a multiple draịva na My Computer panel.
2. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na data na-agafere ma si na mbanye na ọ bụrụ na ọ na-eme n'ụzọ ziri ezi mgbe ahụ, ọ bụ na--ahụ kwuru na onye ọrụ nwere ike nanị-enweta dị ka nkebi kemgbe ịga nke ọma.
Ọ bụrụ na nkebi e okpu onye ọrụ ga-enwe ike imezu ihe ọ bụla nke aga-eme na e kwuru n'elu na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na ndị na-esonụ nwere ike gbalịrị:
1. The Lexar bootit bụ-emelitere dị ka kwa ntuziaka na-website na onye ọrụ kwesịrị-agbalị ọzọ nkebi mbanye.
2. The mbanye ga-reinserted na usoro a ga-rụrụ otu ugboro ọzọ iji jide n'aka na e nwere ihe ịga nke ọma.
3. Onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na ngwaọrụ a scanned na antivirus iji hụ na ihe kasị mma na-eme ka mbanye nke dị na ajụjụ.
> Resource> Flash Drive> Nzọụkwụ site nzọụkwụ ndu nkebi a flash mbanye